१० वर्ष पुरानो रातो नम्बरको फोन आतंकले नेपाली पीडित, दुई जना प्रहरी हिरासतमा पुगेपछि अब त हल्ला नफैलाउन् कि – MySansar
१० वर्ष पुरानो रातो नम्बरको फोन आतंकले नेपाली पीडित, दुई जना प्रहरी हिरासतमा पुगेपछि अब त हल्ला नफैलाउन् कि
Posted on January 5, 2017 January 5, 2017 by Salokya
धादिङ र मकवानपुर लगायतका ठाउँमा रातो नम्बरबाट फोन आएको उठाउँदा मान्छे ठहरै भए रे।
मान्छे मर्ने कुरा आएपछि मान्छे डराउनु नौलो कुरा हैन। फेक कुरामा मान्छेको कतिको चासो हुन्छ र यो फेसबुक ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा कति छिटो फैलन्छ भनेर त माइसंसारले प्रयोग नै गरेर देखाइसकेको छ। अरुलाई आतंकित बनाएर रमाउने केही पीडकहरु पनि हाम्रो समाजमा हुँदा रहेछन्, उनीहरुले यसलाई फैलाए। खासमा रातो नम्बरको फोन आउने र त्यसलाई उठाउने बित्तिकै मान्छे मर्ने भन्ने तथ्य सुरुकै शब्दबाट नै गलत रहेको बुझ्न गाह्रो छैन। खासमा यस्तो हल्ला सुरुमा १० वर्षअघि पाकिस्तानमा फैलिएको थियो। फेसबुक खासै चलेको थिएन त्यतिबेला अनि इमेलबाट चलेको थियो हल्ला। १० वर्षपछि नेपालमा त्यस्तै हल्ला फैलँदा बेकारमा मान्छेहरु आतंकित भए।
१० वर्षअघि यस्तो इमेल पाकिस्तानमा फैलिएको थियो-
Forward this message to all u’r friends and colleagues, and relatives
सन् २००७ मा सुरु भएको यो हल्ला बेलाबेलामा फेरि देखिने हुँदै थियो। सन् २०११ मा यो हल्ला नाइजेरिया पुग्यो। त्यहाँ यस्तो एसएमएस फैलाइएको थियो-
Please, don’t pick any call with 09141 its instant death after the call,7people have died already.please tell others fast,its urgent.
Pls don’t pick any call wit 09141 its instant dead tell others
नाइजेरियामा यो हल्ला फैलिएर यति आतंकित बनाइदिए कि त्यहाँको नियामक निकाय नाइजेरियन कम्युनिकेसन्स कमिसनले मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुलाई आश्वासनै दिनु पर्‍यो। यसबारे बीबीसीले समाचारै बनाएको छ सन् २०११ मा।
फोन उठाउँदा मान्छे मर्नु भनेर सोच्नु नै अकल्पनीय हुन्छ। प्राविधिक रुपमा यस्तो हुन सम्भवै छैन भनेर नियामक निकायले भन्नु परेको थियो।
हल्लामा कहिले चिहानमाथि राखिएका टावरका कारण त कहिले हाइ फ्रिक्वेन्सीका कारण दिमागमा असर पर्ने भनिएको थियो। मान्छे पनि ज्यानै जाने कुरा आएपछि डराइहाले।
त्यसमाथि आँखाले देखे जसरी समाचारसमेत बनाएर हाले केही हावा अनलाइनहरुले। कुन अनलाइन कति विश्वासिलो हो भनेर परीक्षणै नगरी एउटा समाचार हेर्‍या भरमा हो त है भनेर पत्याइहाल्नेहरु आत्तिइहाले। तिनीहरुलाई के थाहा, यी हावा समाचारको खेती गरेर अनलाइनले कमाइराखेका छन्। तपाईँ एक जना मुर्गा बन्दा उसलाई डलरमा कमाइ भइरहेको हुन्छ। हेर्नुस् त के केसम्म लेखेका थिए-
यो भिडियोबाट पनि बुझ्न सकिन्छ-
यस्ता गलत समाचार फैलाउनेमा दुई जना गायकगायिका पनि देखिए। प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गर्‍यो र एक रात राखेर माफी मागेका कारण छाडि पनि दियो। प्रहरीले एपबाट मोबाइलमा कल आउँदा रातो नम्बर बनाउन सकिने भएको खुलासा पनि गरिदियो। गायिका प्राश्नाले भनिन्- रमाइलोको लागि राखेको, यति लम्बिएला भनेर सोचेकै थिइनँ।
हल्ला फैलाएको आरोपमा गायकगायिका त पक्राउ परे तर यस्ता वाहियात खबर केही रकमको लोभमा अनलाइनमा हाल्नेहरु पनि कहिलेसम्म पक्राउ पर्ने हुन् हेर्न बाँकी छ। किनभने उनीहरुलाई निगरानी गरिरहेको प्रहरीले बताएको छ। उनीहरु पनि पक्राउ परे भने बल्ल सात जन्मसम्म हल्ला फैलाउँदिन भनेर सोच्ने हुन् कि !
3 thoughts on “१० वर्ष पुरानो रातो नम्बरको फोन आतंकले नेपाली पीडित, दुई जना प्रहरी हिरासतमा पुगेपछि अब त हल्ला नफैलाउन् कि”
कति हास्नु , हासेरै मर्ने भो,
रातो पहेलो,नीलो भन्ने रंगीन फोन नम्बरनै हुन्न
बिज्ञानको अलिकति ज्ञान भएकालाइ पनि थाह हनेकुरा हो कुनै पनि रे‍डियो तरंग हाइ वेव लेन्थ र हाइ फ्रिक्वेन्सीको एकै पटक हुन सक्दैन यी दुइ विपरीत कुरा हुन |
ब्रेन ह्याम रेन्ज रे … ):
१मेरिका९ मई पनि २०१२ माँ संसार माँ प्रलय हुने भन्दै धेरैले आत्म ह्त्या गरे थे , कतिले ( मायाँन हरु )भएको धन दौलत मौज गरेर सड़क माँ आये थे |
सेल फोन जस्तै अरु उदाहरण
१)बाबूराम , प्रचंड ले नया नेपाल बनाउँछ नेपाल लाइ स्विट्जरल्याण्ड बनाउँछ|- अझै कति छः बिस्वास गर्ने
२) ज्ञानेंद्र मर्सिडीज चढेर फेरी राजदरबार फर्किन्छन , काजी का दिन फर्किन्छन –अझै कति छः बिस्वास गर्ने
३) मु आ हरु आफु आत्महत्या गरेर अरु सैकड़ो लाइ मार्न पाए सीधै जन्नत माँ पुगिन्छ -अझै कति छः बिस्वास गर्ने
४) देउबा , माकुने , झलनाथ , ओली , प्रचंड , बाबूराम र पुराने नेताहरुले नेपाल कोभ्रास्ताचार को अंत गर्छ , देश को बिकाश गर्छ -अझै कति छः बिस्वास गर्ने
५) राजेन्द्र महतो , हृदयस त्रिपाठी , उपेंद्र यादब , महंत ठाकुर सत्तामा आये तराईको बिकाश गर्छ -अझै कति छः बिस्वास गर्ने
यो इन्टरनेट बिकृति हो. हामीलाई यस्तै हावादारी कुरा मात्र किन मन पर्छ? कतै मानसिक रोग त् होइन?